गार्मेन्ट उद्योग यसरी चलाए दिर्घकालिन हुने रहेछ !  HamroKatha
गार्मेन्ट उद्योग यसरी चलाए दिर्घकालिन हुने रहेछ !
उद्यमी किन बन्ने ? समृद्धि र समाजका लागी केही योगदान दिन
सुपथ मूल्यका कपडा उत्पादनमा प्रोफिट मार्जिन कम हुन्छ त्यसैले उत्पादनको सङ्ख्या भने वृहत राख्न सक्नु पर्छ। जाडोको कपडा विशेष गरी मंग्सिर र पौष महिनामा हुने हो। गर्मी सुरु हुँदाको समय पनि व्यापार पिकमा पुग्छ I व्यस्त हुने अर्को सिजन भनेको दसैँको समय हो। सिजनको समय २० लाख देखि ३० लाखसम्मको बिजनेस हुन्छ भन्ने कुरा अन्जनले बताए।
हाम्रो कथा २०७५ चैत १२ गते १७:५५
दक्षिण अफ्रिकामा भएको युथ फेस्टिवलमा सहभागी हुन जाँदा अन्जन भट्टलाई उनका एक आफन्त दाइले २ सय पिस झोला दिए I यी सबै झोला अफ्रिकामा बिक्री गर्‍यौँ भने विदेशमा बस्न-खान खर्च जुट्छ भन्नु सोचेर, बेच्न पुग्ने झोला दिए।
अन्जन दक्षिण अफ्रिका गए I फेस्टिवलको एउटा स्टलमा उनले ती झोलाहरू बिक्रीमा राखे। ३/ ४ दिन स्टलमा बस्दा, सबै झोला बिक्री भए I यही घटनाबाट अन्जनलाई उद्यमी बन्ने प्रेरणा मिल्यो। उनलाई उत्पादनको क्षेत्रमा लग्नु पर्छ भन्ने चेत पलायो I
उनको दाइले जस्तै उनलाई पनि गार्मेन्ट उद्यम सुरु गर्नु थियो I व्यावसायिक योजना थियो तर व्यवसाय सुरु गर्न पुग्ने लगानी थिएन । काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ (कास्कुन) का अध्यक्ष दीपक पनेरुलाई आफ्नो योजना सुनाए I योजना सुनेपछि दीपक पनेरुले अन्जनको नाममा ३ लाख र उनको श्रीमतीको नाममा ३ लाख ऋण उपलब्ध गराए I ६ लाखको लगानीमा ६ वटा सिलाई मसिन र १० जना कामदार भएर सुरु भयो – पवित्रा गार्मेन्ट इण्डस्ट्रिज।
व्यावसायिक पृष्ठभूमि केही थिएन। न सिलाईको नै अनुभव थियो। सबै काम जनशक्ति व्यवस्थापन राम्रो सँग गर्नाले नै सम्भव भयो।
उनले स्कुलहरूसँग कन्ट्रयाक्ट गरी स्कुलका विद्यार्थीको पहिरनमा पर्ने ट्रयाक सुट, टी-सर्ट बनाउने काम गरे। बिस्तारै कम्पनीहरूको लागी टी-सर्ट डिजाइन गर्न थाले। त्यसपछि मार्केटिङ गर्दै जाँदा डिमाण्ड बढ्न थाल्यो। व्यवसाय फ़स्टाउदै गयो।
अन्जनले कस्ता लुगा बनाउँछन् ? उनका ग्राहकको हुन् ?
लता कपडाको कुनै निश्चित मूल्य तोकिएको हुँदैन I ५ हजार पर्ने टी-सर्ट किन्ने जमात पनि छन् र ३ सय, ५ सय पर्ने लुगा खोज्ने जमात पनि छन्। हो यस्तै सुपथ मूल्यमा पहिरनको खोजी गर्ने ठुलो जमात उनका ग्राहक हुन् I
उनले काम गर्दा दीर्घकालीन भिजनका साथ काम गरे I कतै भाडा तिरेर व्यवसाय धान्नु परेको भए, मासिक ५० हजार खर्च भाडाको लागी छुट्ट्याउनु पर्थियो । अन्जनलाई यो खर्च कम गर्नु थियो। उनले एक रोपनी जग्गा लिजमा लिए I त्यसमा आफ्नो फ्याक्ट्री र अफिस राख्न पुग्ने संरचना आफै निर्माण गरे I यसो गर्दा उनलाई सुरुमा लागत १५ लाख लाग्यो। सुरुमा खर्च जुटाउन गाह्रो पनि नभएको होइन I तर, अन्जनले यसको परिणाम १० वर्षमा देख्ने अनुमानका साथ काम अगाडी बढाएका हुन्। यसो गर्दा उनले १० वर्षमा ६० लाख भाडा खर्च जोगाउँछन्। उनको संरचना र त्यसको मर्मत खर्च राख्दा पनि उनलाई ४० लाखको चोखो फाइदा हुने भयो। त्यसैले उनी भन्छन् कि उद्यम भनेको दीर्घकालीन योजना हो I समृद्धि दीर्घकालीन योजना कै परिणाम हुने हो।
उनका उत्पादन होलसेल पसल, खुद्रा लुगा पसलमा गैर बिक्री हुने हो I बजार काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन। उत्पादन हुन्छ, यातायात सुविधा छ भने समान जता पनि लैजान सकिन्छ नि ! पूर्वमा मेलम्ची, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, बर्दिबास तिर स्थित गार्मेन्टमा काम गर्ने ट्रेडर्सहरुको पसलमा डेलिभरी हुन्छ I पश्चिममा पोखरा, धादिङ्ग, स्यांग्जा देखि लिएर बुटवलसम्म समान डेलिभरी हुन्छ I स्थायी बिक्रेताहरूलाई डेलिभरी सेवाले गर्दा धेरै सहज भएको छ। अन्जनले भने पनि आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्ने राम्रो अवसर आफै सृजना गरे I होलसेल, खुद्रा व्यापारी, ग्राहकहरू स्वयम् उनको फ्याक्ट्री र आउलेट मै आई समान खरिद गर्ने व्यवस्था पनि छ I
अन्जनले गार्मेन्ट व्यवसायमा बिजनेस सिजनल हुने कुरा पनि बताए । सुपथ मूल्यका कपडा उत्पादनमा प्रोफिट मार्जिन कम हुन्छ र उत्पादनको सङ्ख्या भने वृहत राख्न सक्नु पर्छ। जाडोको कपडा विशेष गरी मंग्सिर र पौष महिनामा हुने हो। गर्मी सुरु हुँदाको समय पनि व्यापार पिकमा पुग्छ I व्यस्त हुने अर्को सिजन भनेको दसैँको समय हो। सिजनको समय २० लाख देखि ३० लाखसम्मको बिजनेस हुन्छ भन्ने कुरा अन्जनले बताए।
यो व्यवसायमा प्लानिङ्गको भूमिका ठुलो हुने रहेछ I गर्मीको समय – जाडोमा के गर्ने ? कसो गर्ने ? भन्ने कुराको पूर्वतयारी गर्नु पर्छ I जाडोको समय – अब आउँदो गर्मीको मौसममा के गर्ने ? कसो गर्ने ? कसरी गर्ने भन्ने कुराको तयारी गर्नु पर्छ। पूर्वतयारी अनुरूप काम गर्दै गए मात्र समयको माग अनुसार काम गर्न सकिने हो।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालका अनुसार, १० हजार भन्दा धेरै गार्मेन्ट व्यवसाय नेपालमा दर्ता भएका छन्। साना तथा मझौला व्यवसाय प्रशस्त भए पनि ठुलो स्केलमा काम गर्ने उद्यम भने निकै कम छन्।
अहिले पनि भारत र चीनबाट आयातीत लुगाले बजार ओगटेको छ I नेपालका उत्पादन अघि सर्दा बजारको ४० प्रतिशत देखि ४५ प्रतिशतसम्मको माग नेपाली उत्पादनले पूर्ति गरेको छ I त्यसैले, नेपालमा गार्मेन्ट व्यवसाय गर्ने इच्छा राख्नेहरूको लागी अवसर र सम्भावना अझै पनि छन्।
८ मिनेट अगाडि ३ मिनेटमा पढिने
आधुनिक क्रिकेटका महारथी ‘एबी डी भीलियर्स’
२ दिन अगाडि ३ मिनेटमा पढिने
पुराना सामान किनबेचको व्यवसायिक सम्भावना !
३ दिन अगाडि १ मिनेटमा पढिने
खानाले मन बाँध्ने, सम्बन्ध गास्ने भूमिका खेल्छ !
जहाँ लुगा पनि भाडामा पाइन्छ
स्वस्थ खाद्यान्न सँग जोडिएको उद्यम : ‘अर्ग्यानिक अनलाइन’
सफलताका लागी त्याग्नु पर्ने बानी व्यवहार !
बिजनेस सुरु गर्न ७ दिने कार्ययोजना